खाना र पिउने, व्यञ्जनहरू
प्रायः जब मासु र अन्य उत्पादनको लागि बजारमा छाप लगाउँदा उनले एउटा चित्र देख्यो: वृद्ध महिलाहरू पोर्कसँग नजिक विभागहरू बन्द गर्छन् र कुकुरसँग उनीहरूको पोर्क पसल चयन गर्छन् । तिनीहरू यो जस्तै केहि खोज्दैछन्, मा मासु मा अधिक हुनेछ। यो मलाई सधैँ अचम्म लाग्यो: ठीक छ, म सुँगुरको पाङ्ग्राबाट के के सुन्न सक्छु ? अन्तमा, जब जिज्ञासा सफल भयो, मैले यी महिला मध्ये एकसँग सम्पर्क गरें र तिनको प्रश्नलाई सोधे कि मलाई चासो। उनी मेरो ज्योतिको कमीमा छक्क परेको थियो, तर उनले पसिना प्रयोग गरेर दर्जन विभिन्न बर्तनलाई बोलाए। यो बाहिर जान्छ कि न केवल उबला सूप र पोर्चुगल न केवल प्राप्त गरिन्छ, तर तिनीहरू टाँस्न, पकाएको, अचेल र ग्रेट मा फ्रिज गर्न सकिन्छ। पोर्क रिबजको रूपमा यस्तो बर्तन हो , गोभीको साथ टाँस्ने, आलु संग पकाएको। साथै, रिब्स एक सस मा अलग देखि पकाया जान सक्छ र गार्निश संग काम गरे। र तिनीहरूलाई सस र मरिनाडेसको अलग संस्करणहरू मात्र विचार गर्न सकिँदैन। सबै लेखहरू एक लेखमा वर्णन गर्नुहोस् काम गर्दैन, तर तिनीहरूका एक जोडीको बारेमा म भन्छु।
यहाँ, उदाहरणका लागि, टमाटर चटनीमा पखाएको पोर्क पसलहरूको लागि एक नुस्खा हो । तपाईलाई आवश्यक सबै उत्पादनहरू, तपाईं राम्रो बजारमा लिनुहुन्छ - र सस्ता, र मार्केट मा मासु ताजा छ, र त्यहाँ छनौट गर्न सकिन्छ, र तपाईं सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ। रिब ठूलो हुन्छ, धेरै मासु संग, वसा को तह संग। एक डिशको लागि, हामीलाई एक पाउन्ड चाहिन्छ, यदि तपाईं बढी लिन चाहानुहुन्छ, बोरचको लागि अधिशेष प्रयोग गर्नुहोस्। मासुको यो मात्रामा प्याजको 1 हेराइ, टमाटर पेस्टको2चम्मच, तुरुन्तको गुच्छा (यदि गुच्छा मोटो हुन्छ भने, तपाईं आधा लिन सक्नुहुनेछ), राम्रो, नमक, कालो मिर्चको स्वाद।
हामी यस तथ्यसँग पकाउन चाहन्छु कि मेरो पसिनाहरू काटिएका हुन्छन्, एक जना एक र हामी कजानमा मोटो तलको तहमा राख्छौं। कजानले आगो लगाए, तपाईंलाई कुनै पनि तेल चाहिँदैन, मोटो पिल्नेछ र cauldron को तल चिकन हुनेछ। यदि, तथापि, तपाईं पसिहरू संग रिब्स फेला पार्न सक्नुहुन्न, तर कुनै सब्जी तेलले गर्न सक्दैन। हामी प्याजिंग पोर्क मध्यम गर्मीमा छोड्छौँ, हामी प्याजमा व्यस्त छौं। यो क्यूबमा काट्नु पर्छ। जब मोटो पिउँदछ, क्युलोडोनमा प्याज फ्याँस्नुहोस्, यसलाई मिश्रण गर्नुहोस्, यसलाई ढक्कनबाट बन्द गर्नुहोस् र सुनको भून सम्म त्रास गर्नुहोस्। तपाईंलाई सम्झना छ कि हामी टमाटर चटनी मा पोकर पसल पका रहे हो, यसैले चटनी बनाउन को लागी समय हो। यसो गर्न, तपाईं तयार गिनाटो पेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई गिलास पानीको साथमा डुब्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईले दुईवटा टमाटरलाई गटरमा घुम्न सक्नुहुन्छ। परिणामस्वरूप टमाटरको कास कार्लडोनमा राखिएको छ, तरलले सबै मासुको आवरण गर्नुपर्दछ। अब हामी नमस्कार गर्नेछौं, मिर्च, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ, पोर्क पसलहरू लुकाउनुहोस्। चटनी मा ढक्कन को तहत पकाया, उनि 20 मिनेट पछि नरम हुनेछ। तर यो यो सबै हिसाब गर्न बिर्सनु हुँदैन। यो अन्तिम स्पर्श - तुलसी थप्न बनी रहन्छ। मेरो भाडाको पखेटा, सूखे, एक बोर्डमा पतला कटा। हरियो रिब्बका साथ छिटो र बन्द ढक्कन अन्तर्गत अर्को 15 मिनेट बोल्छ। अब तपाईं मात्र गार्निश को हेरविचार गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि उनीहरू पक्कै आलुको सेवा गर्न सक्छन्।
तपाईं पनि अलग-अलग गार्निशको सेवा गर्न सक्नुहुन्न, तर सुँगुरका साथ पखाएको पोर्क पसलहरू पकाउनुहोस्। जुलाई-अगस्टमा यो डिश गर्न सर्वोत्तम हो, यस अवधिको समयमा यो हो कि तपाईले ताजा बैग्लान्चर, ब्रोशनी, मिर्च मिर्च (हामीलाई प्रत्येक टुक्राको आवश्यकता पर्दछ) पाउन सक्नुहुन्छ। हामी गाजर र प्याज (3 पीसीसी।), लिक्स (1 पीसी।) पनि प्रयोग गर्दछौं। यो नुस्खामा सब्जिहरु धेरै छन्, त्यसैले हामी अधिक रिब 2.5 किलोग्राम लिनेछौं।
अग्लोमा आगो राख्नुहोस्, तेस्रो गिलास तेल डाल्नुहोस्। मसाले (मसाले, काली मिर्च, अखरोट) संग रेशमलाई धोएं र कट गर्नुहोस्। उबलने तेलमा, मासु तान्नुहोस्, एक ढक्कन संग राख्नुहोस् र स्टवमा छोड्नुहोस्। सब्जिहरु सबै धुलाई। स्क्वाश र बैजनीहरू क्यूबमा काट्छन्। काली बागबाट शुद्ध गरिनेछ र क्यूब्समा पनि कटौती गरिनेछ, प्याज - आधा के छल्ले, लीक-सर्कलहरू, र गाजर नरमम हुनेछ। पहिलो तौल प्याज र मासु संग गाजर, अर्को चम्मचको नमक थप गर्नुहोस् (वा नमकको सट्टा सोया सॉस हुन सक्छ) र बे काली मिर्च। 10 मिनेट पछि, बाँकी सब्जेर सुत्न। हामी क्युडडोन मा आधे कप उबला भयो पानी डालें, यसलाई ढक्कन संग राख्नुहोस् र यो तयार नभएसम्म सबै चीजको अन्त्य गर्नुहोस्। तयार भान्सा डिलको साथ तयार भइयो।
कसरी स्वादिष्ट घरमा फल बर्फ बनाउने?
स्याउको कन्फिगरेसन: स्वादिष्ट र सुगंधित सर्दिया बिलेटको तयारीको लागि एक नुस्खा
केकडा लाक र गोभी संग क्लासिक सलाद: दिलचस्प व्यञ्जनहरु
उत्तम थाई थाई व्यंजनहरू: व्यंजनहरू र खाना पकाउने सुविधाहरू
छोटो छ। जामुन र अन्य डिसेम्बरसँग पाईको लागि पकाउनुहोस्
बेवकूफ होटल टर्की - पर्यटकहरुका लागि एउटा उद्यानलाई
महिला पट्टि। यसलाई कसरी टाईयो?
छोटो कथा र फिल्म "Kalina Krasnaya" को अभिनेता: यो एक प्रतिभाशाली निर्देशक संग काम गर्न कति सजिलो?
कार्यालय मा हँसिलो जमघट रचनात्मक विचार को उद्भव योगदान
को fusel तेल के हो
को pince-nez के हो? विस्तृत विश्लेषण
ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र: सूची
"Versatis" (प्लास्टर osteochondrosis): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
फैशन 20 20 औं शताब्दीको गरेको: वस्त्र, Hairstyles, कस्मेटिक्स, आभूषण
घुमावदार स्ट्रबेरी: समीक्षा, हेरविचार र उत्पादकत्व को सुविधाहरू
लडाकू "आंधी": सुविधा र फोटो